Ụlọ Nche Nchekwa Elu nke Ụlọ Elu Na-eme Ka Elu China Manufacturer
Nkọwa:Ụlọ Elu Ọdịdị Dị Elu,Oghere Ụlọ Nche na-echekwa n'elu,Ngalaba nke Ụlọ Ọrụ Garage
Home > Ngwaahịa > Na-aga n&#39;ihu n&#39;Ọnụ Ụzọ > Ụlọ Ọrụ Mmebe Ụlọ Ọrụ > Ụlọ Nche Nchekwa Elu nke Ụlọ Elu Na-eme Ka Elu
Ihe Nlereanya.: HF-J623
Ubu oke: 2000 Set/Sets per Month
Akwụkwọ: ISO9001 CE SGS
The i ndustrial kwalite oghere n 'ime njem , nke a na-agụnye usoro ụzọ ụzọ , na- ebuli egwu. Site n'ichepụta ọdịdị dị mma, nke dị nro ma dị mfe, ọ na-enye anyị obi ụtọ. Ịrụ ọrụ nke nnukwu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-eme ka ndị mmadụ nwee mmetụta dị ike. Ọ nwere usoro mmiri na-esi ísì mmiri na usoro dị arọ iji kpuchie ọnụ ụzọ, ọnọdụ dị iche iche nwere ike ịhọrọ ụzọ dịgasị iche iche iji welie elu, na ọtụtụ agba.
Ihe n'usoro nke profaịlụ ọnụ ụzọ ụzọ, akara na ngwaike, na nhọrọ pụrụ iche na-enye gị ohere iji mezie ụzọ ndị a ka ọ bụrụ ihe ị chọrọ. Ihe ndị dị elu, ọrụ nlekọta mara mma na mmezi nlekọta nhọrọ na-enye aka na ndụ ogologo ụzọ, ọnụ ọgụgụ dị ala na-akwụ ụgwọ na oke arụpụta.
Akpaaka, nchebe, ichekwa okpomọkụ, usoro nhazi nke torsion.
A na-eji ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ mmepụta ihe eme ihe n'èzí n'èzí, ụlọ ọrụ lojisti na ụlọ ọrụ ụlọ mpụga.
- Agba agba aja, NEW & NKWUKWU NDỊ NA-EME.
- Oghere nchedo ụlọ nchedo. Jiri nchekwa.
- Eji ya na obere ohere & obere ọnụ ụzọ dị.
- Ntinye ngwa ngwa. Ọnụ ụzọ anyị abanyela na nke a.
- Ipuchi onwe onye mgbe ike di. Na-echekwa nchegbu anyị na nchekwa ahụ ọbụlagodi mgbe ike na-apụ.
- Ogo di nkpa. Ụlọ ọrụ mmepụta ihe anyị na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ngwaahịa ndị a na-egosi CE.
Ihe aturu ahia ahia:
Ụzọ ntụgharị ụzọ ọrụ mmepụta ọrụ:
- Di elu technology & elu mma
1.Ama gị emeputa?
Ee, Anyị nwere ndị ọkachamara nke ndị ọrụ, ọrụ na nyocha,
anyị nwere ụlọ mmepụta onwe anyị.
2. Olee maka ihe atụ?
Ọ bụrụ na anyị nwere nlele na ngwaahịa, anyị ga-enye gị ntinye n'efu, ma ọ bụrụ na anyị enweghị ya na ngwaahịa, anyị ga-eme ya maka gị,
Ihe ngosi anyị maka otu obere panel bụ Free, btw ị kwesịrị ịkwụ ụgwọ
3. ụdị ihe bụ isi ihe gị.
Anyị na-emepụta ụlọ ntanetị na windo Windows, ọnụ ụzọ ụlọ ahịa, Awnings
4. Gini ka Obere Obere?
otu setịpụrụ maka usoro ikpe ka nwekwara ike ịnakwere
5. Ebee ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe gị dị?
Enwetakwu ihe ọmụma biko kpọtụrụ m.
Nabata nhazi ikpe!
Mgbochi Ejiri Iguzogide Ntụte Ihe Ntuchi Uche Kpọtụrụ ugbu a
Oghere na-adọba ụgbọala na Vally Kpọtụrụ ugbu a
ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ mmepụta ihe Kpọtụrụ ugbu a
Ogige ụlọ ọrụ na-arụkwa ụgbọala Kpọtụrụ ugbu a
Oghere Mkpuchi Oghere Ọnụ Ahịa Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ Elu Ọdịdị Dị Elu Oghere Ụlọ Nche na-echekwa n'elu Ngalaba nke Ụlọ Ọrụ Garage Ụlọ Elu Ọnụ Ụzọ Dị Elu Ọnụ Ụzọ Ọdịdị Dị Elu Ọnụ Ọdịdị Elu Dị Elu Pvc Ụlọ Elu Ọnụ Ụzọ Dị Elu Ụlọ Elu Amụma Dị Elu